Politics – Page 113
काठमाडौं ६ फागुन । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भन्दा फरक विचार राख्न नहुने बताएकी छन् । संसद बैठक पछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री झाँक्रीले यस्तो...
काठमाडौं, ६ फागुन-मिलेनियम च्यालेन्न्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नेपालले स्वीकार्न नहुने भन्दै देशभर विरोध भइरहेको छ । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनिरहेको छ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र...
एमसीसीको विरोधमा बानेश्वरमा प्रदर्शन (फोटो सहित)
फागुन-०६, काठमाडौं । एमसीसी पारित गर्न नदिन माओवादी निकट भातृसंगठन अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी) र युथ कम्युनिस्ट लिग नेपालको संयुक्त आन्दोलनमा तल्लीन छन् । बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । फोटो :- ...
संसद बैठक सुरु भएलगत्तै एमाले सांसदको नाराबाजी
काठमाडौं, ६ फागुन -प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै एमालेका सांसदहरू रोष्ट्रम अगाडि उभिएर नाराबाजी गरिरहेका छन् । एमाले विभाजनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोवटाको भूूमिका रहेको भन्दै विरोधमा र आफ्नो...
काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको हो। अब अर्को बैठक आइतबार पुन: बस्ने छ। बिहीबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन...
काठमाडाैं- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रशंसा गरेका छन् । एक अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले अध्यक्ष ओली बोलीमा पक्का भएको बताएका हुन् ।...
संकटमा देउवा सरकार : अबको प्रधानमन्त्री को, राष्ट्रपतिको भूमिका के ?
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन धरापमा परेपछि अबको राजनीतिक परिदृश्यबारे बहस हुन थालेको छ। बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी हरहालतमा संसदमा टेबल गर्ने अडान लिएपछि...
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसिसी सम्झौता टेबल गर्ने तथा बैठक निर्वाध सञ्चालन गर्नेलगायत विषयमा सहमति जुटाउन सत्ता साझेदार दलको बैठक आज शुक्रबार पुनः बस्ने भएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बिहिबार...